बानी व्यवहार सुधारौं, दुरी कायम गरौं नत्र फेरी लकडाउनको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छः जोस भ्याण्डेलर – BikashNews
बानी व्यवहार सुधारौं, दुरी कायम गरौं नत्र फेरी लकडाउनको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छः जोस भ्याण्डेलर
२०७७ साउन २२ गते १६:३५ विकासन्युज
नेपाल सरकारले लकडाउनलाई हटाएपछि संक्रमणको दर झनै बढ्ने संकेत देखिएको छ । काठमाडौं उपत्यका लागायत देशका मख्य ठूला सहरहरुमा समुदाय स्तरमा संक्रमण देखा परेको छ । संक्रमण दर पनि बढ्दै गएको छ । लकडाउन खुलेसँगै मानिसहरुको आवागमन पनि बढेको छ । संक्रमितहरु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदा संक्रमण फैलिने सम्भावना बढेको छ । यसलाई पछिल्लो समय समुदायमा संक्रमणका केसहरु देखिनुले पुष्टि गरेको छ । यति नै बेला सरकारले गलत समयमा लकडाउन गर्ने र गलत समयमा खोल्ने काम गरेको भन्दै आलोचना गर्नेहरु पनि धेरै छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपालमा कोरोनाको अवस्था बारे कसरी हेरीरहेको छ । के नेपालमा महामारी फैलने खतराको संकेत देखा पर्न लागेको हो ? लकडाउन फेरी आवश्यक छ ? यिनै प्रश्नसहित विश्व स्वाथ्य संगठनका नेपाल प्रमुख डा. जोस भ्याण्डेलरसँग गरिएकाे कुराकानी ।
नेपालमा पछिल्लो समय कोभिड १९ संक्रमणको दर बढ्दो क्रममा देखिएको छ, यसलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले कसरी हेरिरहेको छ ?
नेपालमा कुनै समय यस्तो थियो जतिबेला यहाँ देखिएका सबै संक्रमितहरू वैदेशिक रोजगरीबाट फर्र्किका कामदारहरू थिए, मूलतः भारतबाट फर्किएका व्यक्तिहरू । यी व्यक्तिहरूमध्ये धेरै संक्रमित थिए । शुरूशुरूमा नेपालमा रहेका संक्रमितहरू भारतबाट फर्र्किएका थिए । नेपालमा आएपछि गरिएको परीक्षणमा उनीहरूको नतिजा पोजिटिभ देखिएको थियो । यी व्यक्तिहरूलाई आइसोलेसनमा पठाइयो, क्वारेन्टाइनमा राखियो, यीनै मुख्य संक्रमित थिए । पछिल्लो दुई महिनामा हामीले नेपालमा फर्कने व्यक्ति, आप्रवासीहरूको सङ्ख्यामा गिरावट आएको देखेका छौं । नेपाल फर्कने मानिसहरू सङ्ख्यामा कमी आएको छ । त्यसैले, कोभिडका संक्रमितहरूको सङ्ख्यामा पनि कमी आएको हो ।
समुदायहरूमा भइरहेका घटनाहरूलाई हेर्दा केही हदसम्म संक्रमण फैलिएको हो, तर व्यापक रूपमा संक्रमण फैलिसकेको छ भनेर हामीले भन्नु हतारो हुन्छ । स्थानीय तहहरूमा, तपाईले भने जस्तै कही कतै यात्रा नगरेका व्यक्तिहरू पनि विस्तारै संक्रमित भइरहेका छन् । हामीले अझ गहिरिएर विश्लेषण गर्यौं भने, आफैं यात्रा नगरेका तर यात्रा गरेका व्यक्तिहरूको नजिकको सम्पर्कमा आएका धेरै व्यक्तिहरू भेट्न सक्छौँ । सबैको हकमा यो लागू नहोला तर आफैंले यात्रा नगरेका धेरै संक्रमितहरूको यात्रा गरेकाहरूसँगको सम्पर्क देखिन्छ । यसो भनिरहँदा, समुदायस्तरमा संक्रमण फैलिएकै छैन भनेर हामीले भन्ने खोजेका होइनौं । केही स्थानहरूमा समुदायस्तरमा संक्रमण देखिएको छ, तर ती स्थानहरू स्थानीय स्तरमा रहेका छन् ।
हामी सरकारसँग नियमित छलफलमा छौं । उहाँहरूसँग अवस्था के छ, तथ्याङ्कले के भन्छ, कमी कमजोरीहरू के छन्, अझै थप के गर्नुपर्छ जस्ता विषयमा हामी निरन्तर छलफल गरिरहेका छौँ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको भूमिका सरकारलाई सल्लाह सुझाव दिने हो । हामी कुनै पनि निर्णय लिदैनौं । निर्णय सरकारले लिन्छ । हामी सरकारसँग दैनिक रूपमा काम गरिरहेका छौं र उहाँहरूलाई तथ्याङ्कको विश्लेषण गर्न पनि सहयोग गरिरहेका छौं । हाल के भइरहेको छ, महामारी (इपिडियोमोलोजी) कसरी परिवर्तन भइरहेको छ अर्थात विदेशबाट फर्किनेहरूको सङ्ख्यामा कमी आएसँगै संक्रमितहरूको विवरणमा कसरी परिवर्तन भइरहेको छ भन्ने विषयमा हामी सरकारसँग छलफल गरिरहेका छौं । संक्रमितहरूको सङ्ख्या घटेको छ । अब हामी अर्को चरणका लागि तयार हुनुपर्दछ किनभने संक्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्नु साँच्चै जोखिमपूर्ण हुन्छ । हामीले सरकारसँग गरिरहेको छलफल यिनै विषयमा केन्द्रित रहेको छ ।
जनसङ्याको घनत्व भएका ठाउँहरूमा फेरि संक्रमणको दर बढी भेटिएको छ । तराईका प्रमुख शहरहरूसँगै काठमाडौंमा पनि । यो अवस्था आउनुमा कहाँ कस्तो खालको गल्ती भयो ?
सर्वप्रथम, मेरो विचारमा यो कसैमाथि दोष लगाउने विषय होइन जस्तो लाग्छ । मेरो विचारमा सकारात्मक भएर यी कुरालाई विश्लेषण गर्नु र समाधानको खोजी गर्नु सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । समस्या के छन् भनेर खोतलीरहनु भन्दा पनि । मुख्य विषय भनेको हामी सबै एउटै धरातलमा छौं । हामी सबैले एउटै समस्याको सामना गरिरहेका छौं र यहाँ सबैको भूमिका रहन्छ । नागरिक समाज, सरकार वा विश्व स्वास्थ्य संगठनले पर्याप्त काम गरेनन् भन्ने होइन, त्यो विषय नै होइन । मुख्य विषय के हो भने हामी सबैले स्थितिलाई राम्रो बनाउन सक्नेसम्म काम गर्नु हो । हामीले प्रायः बिर्सिने कुरा के हो भने पर्दा पछाडि धेरै कामहरू भइरहेका छन् र यी कामको बारेमा मिडियामा सँधै चर्चा हुँदैन, यी कुराहरू सामाजिक सञ्जालमा आउँदैनन्, मानिसहरूले यी कुराहरू सधैं देख्दैनन् । तर पर्दा पछाडि धेरै कामहरू भइरहेका छन् । हामीलाई लकडाउनका बारेमा थाहा छ । क्वारेन्टाइनमा के के भइरहेको छ भनेर सबैलाई थाहा छ । तर आवश्यक सामग्रीहरू पर्याप्त मात्रामा आपूर्ति होस् भन्नका लागि पनि धेरै कामहरू भइरहेका छन् । उदाहरणका लागि, परीक्षणको क्षमता बढाउनका लािग पनि सरकारले धेरै काम गरेको छ ।
तपाईंले अहिले भर्खरै भन्नुभएकै कुरालाई म अर्कै तरिकाले सोध्न चाहन्छु । हामी सम्भावित जोखिमको अवस्थामा छौं, यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि औपचारिक रूपमा भनिसकेको छ । अब यो अवस्था आउन नदिन अर्थात् सम्भावित विस्फोट हुन नदिनको लागि के गर्ने ? के लकडाउन उपाय हुन सक्छ ?
संक्रमितहरूको सङ्ख्या विस्तारै बढ्दै गइरहेको हामीले देखिरहेका छौं र प्रेसले पनि यो विषय उठाइरहेको छ । उसो भए, हामीले के गर्न सक्छौं त ? हामीले पक्कै केही गर्न सक्छौं भनेर हामीलाई थाहा छ । हामीले गर्न सक्ने भनेको दूरी कायम गर्ने हो । यो भाइरस यत्तिकै फैलिएको होइन । एक व्यक्ति संक्रमित भएपछि अर्को व्यक्ति संक्रमित हुनका लागि भाइरस सर्नु पर्दछ । यदि हामीबीच पर्याप्त दूरी भएमा एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा भाइरस सर्नका लागि धेरै गाह्रो पर्दछ । हामीले अपनाउनु पर्ने भनेर सधैँ भनेर पनि नपुग्ने यो नै सबैभन्दा आधारभूत नियम हो । कुनै पसलमा कुनै सामान किन्दा होस् वा कतै बाहिर जाँदा होस वा बसमा यात्रा गर्दा नै किन नहोस्, जहाँसुकै पनि तपाईंले यो नियमको अनुसरण गर्नुपर्दछ । आफू र अर्को जोकोही व्यक्तिबीच कम्तीमा १ मिटरको दूरी भएको सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । यदि तपाईले आफ्नो हात फैलाउँदा अर्को व्यक्तिलाई छुन सक्नुहुन्छ भने तपाई एकदमै नजिक हुनुहुन्छ भन्ने बुझ्नुहोस् ।
हामीले गर्नुपर्ने आधारभूत कुरा नै त्यही हो । धेरै मान्छेहरू भएको वातावरणमा मास्कले सहयोग गर्दछ । मास्क लगाउनाले सहयोग गर्दछ, किनभने, यदि संक्रमित व्यक्तिले खोक्दा वा बोल्दा, भाइरस उत्पादन हुन्छ र बाहिर निस्किन सक्छ । भाइरस धेरै पर पुग्दैन तर यदि कोही मानिसहरू वरिपरि भएमा र पर्याप्त दूरी कायम गर्न नसकिएमा, मास्कले भाइरसलाई धेरै पर पुग्नबाट रोक्छ । त्यसैले, मास्कले निश्चय नै सहयोग गर्दछ, तर मास्क लगाएको छ भन्दैमा दूरी कायम नगरे पनि हुन्छ भन्ने चाहिं होइन । त्यस्तो गर्नु हुँदैन । दूरी कायम गर्नु धेरै नै महत्वपूर्ण हुन्छ । मास्कले सहयोग गर्छ, हात धुँदा सहयोग हुन्छ, खोक्दा अपनाइने व्यवहारले सहयोग गर्दछ । यी कुराहरू महत्वपूर्ण हुन् ।
हामीले यी कुराहरूको अनुसरण गर्नुपर्दछ । लकडाउनका बारेमा तपाईको प्रश्नको बारेमा, के नयाँ लकडाउन आवश्यक छ भन्ने विषयमा, यो नितान्तः सरकारको निर्णय हो । किनभने, लकडाउनले मानिसहरूलाई दूरी कायम गर्न बाध्य बनाउँछ । यदि कोही पनि घरबाट निस्किन पाएन भने, नजिकै रहने गरी धेरै मानिसहरूको भीड हुँदैन । त्यसैले, लकडाउन भनेको दूरी कायम गर्न मानिसहरूलाई बाध्य बनाउनु हो । यदि दूरी कायम गर्ने विषयमा हामी अनुशासित भयौं भने, शायद लकडाउन नगर्दा पनि हुन्छ ? तर, यदि मानिसहरूले त्यस्तो (दूरी कायम) गर्न सकनेनन् भने, सरकार लकडाउन गर्न बाध्य हुनसक्छ । लकडाउनको विभिन्न अर्थ हुनसक्छ । पहिलेको तीन महिनासम्म भएजस्तो देशैभरि लकडाउन गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहन पनि सक्छ । तर, स्थानीय स्तर केन्द्रित लकडाउन चाहिं शायद सामाधान हुनसक्छ ।
साथै, लकडाउन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि विविधता रहेको छ । पूर्ण लकडाउन गर्ने कि आंशिक भन्ने विषयमा । के के कुरा चल्न दिने ? मेरो विचारमा, हामीले लकडाउनबाट के कुरा हासिल गर्न खोजेका हौं भन्ने विषय निर्धारण गर्दा यी सबै निर्णयहरू उपर ध्यान दिनुपर्दछ । लकडाउन विकल्प त हुँदै होइन । सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउन शुरू गर्दै गर्दादेखि नै हामीले आवश्यक परेमा पुनः लकडाउन गर्ने विकल्प हुनुपर्दछ भनेर भन्दै आएका छौं । लकडाउन सम्बन्धी निर्णय लिनु एक गाह्रो काम हो । यो स्वास्थ्य क्षेत्रसँग मात्रै सम्बन्धित निर्णय होइन, स्वास्थ्य क्षेत्रले डोहोर्याउने निर्णय भने पक्कै हो । यदि महामारीको अवस्था छ भने, लकडाउनले भाइरसलाई फैलिनबाट रोक्छ । तर यसको अर्थतन्त्र, सामाजिक जीवन र अन्य पक्षमा अन्य धेरै प्रभाव हुन्छ । र यो सन्तुलनको विश्लेषण सरकाले गर्नुपर्दछ । त्यसैले हामीले गर्नुपर्ने काम हामीले गर्यौं भने, कडा वा लामो लकडाउनको आवश्यकता कम हुनसक्छ । यदि हामीले राम्ररी व्यवहार गरेनौं भने, सरकारले केही हदसम्मको लकडाउन गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।